» ‘मिस ब्युटिफुल हेयर’ मा बिपना अगाडि, रोज लामा सातौँ स्थानमा, कसको कति भोट ?
‘मिस ब्युटिफुल हेयर’ मा बिपना अगाडि, रोज लामा सातौँ स्थानमा, कसको कति भोट ?
२३ बैशाख २०७६, सोमबार ११:११
चन्द्र घलान/मकवानपुर, २३ बैशाख । मिस नेपाल २०१९ अन्तर्गत ‘मिस ब्युटिफुल हेयर’ को लागि अहिले लिभोन लाईफ एप मार्फत भोटिङ भईरहेको छ । यस भिडियोमा हामीले मिस ब्युटिफुल हेयरको भोटिङमा कसले कति भोट प्राप्त गरे ? को कति औँ स्थानमा छन् र लिभोन लाईफ एपबाट भोट गर्ने तरिकाका बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ । कृपया पुरा भिडियो हेरेर तपाईको विचार कमेन्टमा लेखिदिनुहोला ।
मिस ब्युटिफुल हेयरमा सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गर्दै चितवनकी बिपना सुवेदी पहिलो स्थानमा छिन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा बिपनाले ३६.६ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै शिर्ष स्थानमा छिन् । त्यस्तै काठमाडौँकी प्रदिप्ता अधिकारी १९.२९ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै दोस्रो नम्बरमा छिन् । उनी मिस एथलेटकी विजेता समेत हुन् । काठमाडौँकी सान्त्वना मालाकार ११.५ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा छिन् भने काठमाडौँकी निशा पाठक ७.३३ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै चौथो नम्बरमा छिन् । काठमाडौँकी अनुस्का श्रेष्ठ ५.२१ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै पाँचौँ नम्बरमा छिन् भने काठमाडौँकी रिया बस्नेत ५.१७ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै छैठौँ नम्बरमा छिन् । यता मिस ट्यालेन्ट राउण्डमा सबैको मन जित्न सफल काठमाडौँकी रोज लामा ४.१८ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै सातौँ स्थानमा छिन् । काठमाडौँकी सोफिया भुजेल ३.२८ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै आठौँ स्थानमा, काठमाडौकी रक्षा उप्रेती १.९८ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै नवौँ स्थानमा र ललितपुरकी अस्मिता महर्जन १.१६ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै दशौँ स्थानमा छिन् । अन्य प्रतियोगीको भोट प्रतिशत र लिभोन लाईफ एपबाट भोट हाल्ने तरिका जान्नका लागि यो भिडियो हेर्नुहोस्-
मिस ब्युटिफुल हेयरको भोटिङमा भैरहवाकी शिवानी घिमिरेले १.१३ प्रतिशत, काठमाडौँकी प्रथा अधिकारीले १ प्रतिशत, भद्रपुरकी पुजा श्रेष्ठले ०.५८ प्रतिशत र ललितपुरकी नितिका कर्मचार्यले ०.४८ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेकी छिन् । त्यस्तै पोखराकी सारा बजिमायाले ०.२७ प्रतिशत, काठमाडौँकी जेन्नी महर्जनले ०.२६ प्रतिशत, मोरङकी जेनिशा थपलियाले ०.२४ प्रतिशत, काठमाडौँकी न्यान्सी बोगटीले ०.२१ प्रतिशत, पोखराकी एलिशा जोशीले ०.२ प्रतिशत र काठमाडौँकी किरण थापाले ०.१३ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेकी छिन् । ललितपुरकी सुभेच्छा अधिकारीले ०.१३ प्रतिशत, भक्तपपुरकी मिरा कक्षपतिले ०.१२ प्रतिशत, भैरहवाकी सँस्कृति घिमिरेले ०.०६ प्रतिशत र ललितपुरकी लक्ष्मी राउतले ०.०३ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेका छन् । झापाकी प्रकृति कट्वाल ०.०२ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्दै अन्तिम स्थानमा छिन् । यो सामाग्र्री तयार पार्दाको डाटा हो, अहिले यसमा फेरबदल समेत भईसकेको हुनसक्छ । तपाई यसको जानकारी एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
मिस ब्युटिफुल हेयरमा भोट गर्नको लागि तपाईले सर्वप्रथम गुगल प्ले स्टोर वा अन्य एप स्टोरहरुबाट लिभोन लाईफ एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तपाईको एप स्टोरमा गएर सर्च बक्समा लिभोन लाईफ टाईप गरी सर्च गर्नुहोस् । त्यसपश्चात एपलाई डाउनलोड गरी ईन्स्टल गर्नुहोस् । त्यसपछि एपलाई ओपनमा क्लिक गरी खोल्नुहोस् । एप खुल्ने बित्तिकै ट्रेण्डिङभन्ने अप्सन सहित भोट फर मिस ब्युटिफुल हेयर भन्ने ट्याब खुल्छ र त्यसमा लिडिङ बोर्ड समेत हुन्छ । तपाई माथि सिधै लग ईन गर्न वा लिडिङ बोर्डमा जानसक्नुहुनेछ । लिडिङ बोर्डमा गएपछि त्यहाँ तपाईले मिस नेपालका २५ प्रतियोगीहरुको नामसहित सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने प्रतियोगीको क्रममा फोटो, भोट प्रतिशत र भोट नाउ भन्ने अप्सन पनि देख्नसक्नुहुनेछ ।
त्यसपछि तपाईलाई मनपर्ने कुनै प्रतियोगीको फोटो वा उक्त फोटोको दायाँतिर भएको भोट नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । यसरी क्लिक गर्दा उक्त प्रतियोगिको भिडियो सहितको बायोग्राफी र चनेट नाउ भन्ने अप्सन सहितको ट्याब खुल्छ । त्यहाँ तपाईले प्रतियोगीका बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ । यहाँ मैले रोज लामाको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु । त्यसपछि भिडियोको तल नामसँगै दिइएको भोट नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । यसो गर्दा ‘यु मस्ट लग ईन टु भोट’ भन्ने डाईलग बक्स आउँछ अर्थात हामीले भोट गर्न लग ईन गर्नैपर्छ । त्यसपछि लग ईन विथ फेसबुकमा क्लिक गर्नुहोस् । यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको फेसबुक लग ईन छ भने कन्टिन्यु एज भन्ने लिंक आउँछ जसमा तपाईको फेसबुकको नाम र प्रोफाईल फोटो देखाउँछ । यदि लग ईन गर्नुभएको छैन भने फेसबुकमा लग ईन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कन्टिन्यू एजमा क्लिक गरेपछि भोट नाउमा क्लिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँ प्लस माईनसको चिन्ह सहित भोट नाउ भन्ने अप्सन आउँछ । त्यहाँ तपाईसँग भएको भोट संख्या दिईन्छ । सुरुमा हामीसँग २० वटा भोट भएकोले यसलाई घटाएर वा २० वटै भोट एउटै प्रतियोगीलाई दिन पनि सकिन्छ । उदाहरणका लागि मैले यहाँ २० वटै भोट राखेर भोट नाउमा क्लिक गरेको छु । यसो गर्दा उक्त प्रतियोगीलाई २० भोट गर्ने हो भन्ने डाईलग बक्स आउँछ र त्यसमा ‘यस’ मा क्लिक गर्नुहोस् । यसो गर्दा २० भोट उक्त प्रतियोगिलाई जान्छ । र तपाईले गर्नुभएको भोट सफल भयो भन्ने म्यासेज पनि आउँछ ।
यसरी हामीले भोट गर्न सक्छौँ । भिडियोमा देखाईजस्तै २५ जना प्रतियोगीको लिष्टमा अबाउट भोटिङ टर्मस् भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ । त्यहाँ भोट कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी दिइएको छ । यसमा दिइए अनुसार लिभोनमा प्राप्त भोट र आयोजकको निर्णय अनुसार मिस ब्युटीफुल हेयर छनौट गरिने छ । हामी भोट गर्नेहरुले सुरुमा साईन अप अर्थात लग ईन गर्दा २० भोट दिन पाउने सुविधा दिईन्छ र हरेक दिन लग ईन गर्दा १० भोट दिने सुविधा दिईन्छ । अर्थात तपाईले हरेक दिन १० भोट पाउन सक्नुहुन्छ । तर यदि रिफर गर्दा साथीले पनि एप लग ईन गर्यो भने दुबैले थप २० भोट गर्न सक्नेछन् । भोट गर्नेहरुमध्येबाट एक जनाले मिस नेपालको फाईनल लाईभ शोमा प्रवेश पाउनेछन् । भोटिङ मे ८ तारिखको दिउँसो १२ बजेसम्म खुला रहनेछ । हामीले लिभोन लाईफ एपको डाउनलोड लिंक भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा राखेका छौँ ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? उत्कृष्ट २५ मध्ये तपाईको विचारमा को बन्न सक्छिन् मिस नेपाल २०१९ ? अनि को बन्न सक्छिन् लिभोन मिस ब्युटिफुल हेयर ? यसको जवाफ पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोलाई लाईक र शेयर गरिदिनुहोला र अन्य भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला ।